Thwebula Hotspot Shield 4.7.4 – Android – Vessoft
Thwebula Hotspot Shield
License: Adware, shareware
Hotspot Shield – a isofthiwe ukunikeza semfihlo the internet kanye nokuvikelwa uxhumano Wi-Fi. Isofthiwe efihla IP-ikheli umsebenzisi ngokwakha VPN phakathi idivayisi and internet umhlinzeki. Hotspot Shield ikuvumela ukuba uthole ukufinyelela sites okuqukethwe ngokwendawo kuvinjelwe. Isofthiwe inquma elilungile ukuvikelwa inethiwekhi ngokuzenzakalelayo, kuye ngokuthi ezingeni layo of security. Hotspot Shield kwenza ukushintsha kalula phakathi amaseva ekhona USA, Japan, Great Britain nakwamanye amazwe.
Encrypts traffic angenayo naphumayo
Ukucasha of the-address IP
Ukufinyelela site nokuqukethwe ngokwendawo kuwo
Amazwana on Hotspot Shield:
Hotspot Shield Ahlobene software:
English, Français, Español, 中文... Blokker 2.0.9
English, Afrikaans, Українська, Français... Skype 7.22.0.322